March | 2015 | ဂန္တ၀င် | Page 2
GandaWinAdmin - Mar 11, 2015
လွန်ခဲ့တဲ့ ခြောက်နှစ်လောက်ကတည်းက တရုတ်ပြည်အလယ်ပိုင်း ရှန်ရှီ(Shaanxi) ပြည်နယ်မှာ နေထိုင်တဲ့ သက်ကြီးပိုင်း အမျိုးသမီး(၅)ဦးလောက်ဟာ လေလွင့်နေတဲ့ခွေး (၁၃၀၀ ) ကျော်ကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် ထားပါတယ်။ မနက်တိုင်း (၄) နာရီထပြီး ဒီခွေးလေးတွေကို အစာ (၄၀၀) ကီလိုဂရမ် ချက်ကျွေးလေ့ရှိပါတယ်။ ခွေးလေးတွေ နေထိုင်ဖို့ အဆောက်အဦးကိုတော့...
Relationship တစ်ခုကို သွေးအေးသွားစေတဲ့ အကြောင်းအရင်းများ
၁။ သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကိစ္စတွေမှာ စိတ်မလုံမခြုံဖြစ်နေခြင်း။ ၂။ တစ်ယောက်အပေါ်တစ်ယောက် ယုံကြည်မှုတွေ နည်းပါးလာပြီး သံသယတွေများနေခြင်း။ ၃။ Facebook ကဲ့သို့သော လူမှုကွန်ယက်များ အလွန်အကျွံသုံးပြီး ကိုယ့် Relationship ကို ဂရုစိုက်ဖို့မေ့နေခြင်း။ ၄။ အလွန်အမင်း သဝန်တိုတတ်ပြီး စိတ်လိုက်မာန်ပါ ပြောဆို စွပ်စွဲတတ်ခြင်း။ ၅။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အဆက်အသွယ်နည်းပါးနေခြင်း။ ၆။...
GandaWinAdmin - Mar 10, 2015
၁။ လူမှုဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်မှု ရှိခြင်း။ ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဘဝမှာ လူမှုဆက်ဆံရေးဟာ သိပ်ကိုအရေးပါလာပါပြီ။ ဒီတော့ လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ကျွမ်းကျင်နေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အလုပ်ခွင်မှာဆိုလည်း လက်အောက်ငယ်သားဖြစ်စေ၊ အထက်လူကြီးနဲ့ဖြစ်စေ အကောင်းဆုံး ဆက်ဆံနိုင်ခြင်းက အလုပ်ကိုပိုမိုတွင်ကျယ်စေပြီး စိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်စေမှာပါ။ လူတွေနဲ့ ကောင်းကောင်းဆက်ဆံနိုင်ပြီဆိုရင် ရောက်လေရာ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အကောင်းဆုံးရပ်တည်နိုင်မှာပါ။ ၂။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ...
အီတလီနိုင်ငံမှာ အန်နာ စီတယ်လီနဲ့ ရောင် ဘရတ်ဇဲလ် (Anna Citelli and Raoul Bretzel) တို့ပူးပေါင်းပြီး သေဆုံးသွားတဲ့သူတွေကို လွမ်းဆွတ်သတိရနေမယ့် ကျန်ရစ်သူတွေ အတွက် အမှတ်တရဖြစ်စေဖို့ အကြံအစည်လေးတစ်ခု အကောင်အထည် ဖော်နေကြပါတယ်။ အဲဒါကတော့ သေဆုံးသွားတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို အထူးပြုလုပ်စီစဉ်ထားတဲ့ သစ်စေ့ထဲကို...
GandaWinAdmin - Mar 9, 2015
ဒေါက်တာ ဘီလီ ကွန်း (Dr. Billy Cohn ) နဲ့ ဒေါက်တာ ဘတ် ဖရာဇီယာ(Dr. Bud Frazier)တို့ဟာ နှလုံးရောဂါကြောင့် လူတွေရဲ့ သက်တမ်းတိုမှုနဲ့ ယခင်ကတီထွင်ခဲ့တဲ့ နှလုံးအစားထိုး ကိရိယာတွေရဲ့ အဆင်မပြေမှုတွေကို ကူညီဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ ရေရှည်အသုံးတည့်နိုင်တဲ့ နှလုံးအစားထိုး ကိရိယာတစ်ခု...
GandaWinAdmin - Mar 8, 2015
ဂန္ထဝင်မဂ္ဂဇင်းမှ အပတ်စဉ် နယ်ပယ်အသီးသီးမှာ အောင်မြင်နေတဲ့ ထက်မြက်တဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ အားကျအတုဖွယ် အကြောင်းအရာလေးတွေကို (၅) မိနစ်စာ အင်တာဗျူးလုပ်ပြီး ပရိသတ်ကြီးကို မျှဝေလေ့ရှိပါတယ်။ အခုတစ်ပတ်မှာတော့ ချက်ပြုတ်မှုလောကမှာ နာမည်တစ်လုံးနဲ့ ရပ်တည်နေတဲ့ မကြာသေးမီကမှ လန်ဒန်ကပြန်ရောက်လာတဲ့ မအိသက်ရဲ့ အကြောင်းလေးကို တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ မအိသက်ရဲ့အကြောင်း အနည်းငယ်...